Customer comments – inyaKid
by zhibin zhou March 20, 2022
Mee Nge Lay recommends InyaKid.
ပေးရတဲ့ price ၊ ရလိုက်တဲ့ quality ကစိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ် ၊ ဒီထက်မကရောင်းရပါစေ
Coe Coe recommends InyaKid.
အိတ်ကလေးကလဲ အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့် ဒီpgလေးမှာ ဝယ်ရတာလဲစိတ်တိုင်းကျပါတယ်ရှင့်
Sa Aye Min Paing recommends InyaKid.
ဒီပေ့ခ်ျက အိတ်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းပြီး Quality လည်းမိုက်တယ်။ ပေ့ခ်ျက မင်မင် ကလည်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတယ်။ကိုယ်နဲ့ လိုက်မည့်အရောင်လေးတွေလည်း‌ recommend ပေးတယ်။ Customerကို စိတ်ချမ်းသာစေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းအပြည့်ပေးတယ်။ I love InyaKid
Mary Mya Phu Nge recommends InyaKid.
အိတ်လေးက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် အသားလဲကောင်းတယ်
ရေမွှေခဲ အနံလေးကလဲ စားချင်စရာလေး
Thiri Thirimoe recommends InyaKid.
အရမ်းအဆင်ပြေတယ် အိတ်လေးတွေက ရောက်တာနဲ့ အကုန်ကုန်ပဲ အပြင်မီာ ပိုတောင်လှသေးတယ် အိတ်တွေက
reply လည်း မြန်လို့ နောက်ကြိုက်တာတွေ့လည်း ထပ်မှာအုန်းမယ်
Lamin Thiri recommends InyaKid.
အိတ်လေးတွေကဈေးလဲတအားတန်သလို quality ပိုင်းလဲတော်တော်ကောင်းတယ် အစကဈေးနည်းလို့ quality ပိုင်းကိုစိုးရိမ်နေတာ ပစ္စည်းရောက်လာတော့ တကယ့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရတာ ပေးရတဲ့ဈေးထက်ပိုတန်တဲ့ quality လေး deli ခကလဲအရမ်းမများဖူး service လဲတော်တော်ကောင်းတယ် waiting time 1 weekဆိုပီး ၂ရက်လောက်နဲ့ကိုရောက်လာတယ်
MiChi KoKi recommends InyaKid.
Instock ပြန်ဝင်တော့ ကြိုက်တဲ့ အိတ်လေးရတယ် အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေ
Yu Po Po Aung recommends InyaKid.
ပစ္စည်း quality ကောင်းပြီးcustomer service ကလည်းအရမ်းကောင်းလို့နောက်လည်းအားပေးသွားဦးမယ်
Rosalynn JueJuu recommends InyaKid.
i am enjoy with your goods and i'm happy with patient response of page's admin.
Phyu Sin recommends InyaKid.
အိတ်​လေး မှာထားတာ ​ရောက်ပီရှင့် .. .. ပထမဆုံး ၀ယ်ဖူးတဲ့ online shop ​လေးမှာ အဆင်​ပြေလို့ ​ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ..Inya kids ဒီထက်မက ​အောင်မြင်ပါ​စေ​နော်
Zin Mar Win recommends InyaKid.
ပစ္စည်း လေးရောက်လာပါပြီရှင့် ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ အရမ်းလှပါတယ် ရှင့် ပစ္စည်း ကစျေးသင့်ပြီး quality လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင့် မမရေ ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရှင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း လေးအတိုင်းရောက်လာပါတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရှင့်
Gue Gue recommends InyaKid.
Shin Kai Su recommends InyaKid.
အိတ်လေးမှာပြီးရောက်လာတော့လည်းအရမ်းလှတယ် qualityလည်းကောင်းပြီး မှာယူရတာအစကနေအဆုံးအကုန်အဆင်ပြေပြီးစိတ်ချမ်းသာရတယ်။ကျေးဇူးပါနော်
Phu Myat Thwe Tun recommends InyaKid.
page တိုင်းကို review မပေးဖူးဘူး
ဒီတစ်ခါဝယ်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ် reply ကြာတာမျိုးလည်းမရှိဘူး မေးသမျှလည်း စိတ်ရှည်တယ် အိတ် Quality ကလည်း ထင်ထားသလိုရတယ်
Añdëllã Light recommends InyaKid.
အိတ် မှာလိုက်ပီးမှအရမ်းသေးပီးပြတဲ့ပုံနဲ့မတူမာစိတ်ပူနေခဲ့ပေမယ့် ပစ္စည်းရောက်တော့အရမ်းမသေးတဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းပီးပုံထဲကအတိုင်းဖြစ်နေလ်ို့ အဆင်ပြေပါတယ်
KaNt Kaw Kks recommends InyaKid.
Good Customer service & Qualified Products available & Fair price
Líng Xióng Mão recommends InyaKid.
customer service က ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်း
inya kidsက မှာရတာ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်
Kay Zar Thu recommends InyaKid.
May Myat Zaw recommends InyaKid.
ေပးရတဲ့ေစ်းနဲ႔ quality နဲ႔က အရမ္းတန္လြန္းလို႔ ေနာက္လည္း အားေပးအံုးမွာပါေနာ္
Tin Moe Lwin recommends InyaKid.
May Thura Zin recommends InyaKid.
Shwe Yee Oo recommends InyaKid.
I really like your service .
I ordered bags and earrings and necklace twice for now.
The service remains the same with hospitality.
Naw Wah Khu Say recommends InyaKid.
Asacustomer of you I am very happy for don't need to waitalong time and getting quality bags.
Mâř Łâř recommends InyaKid.
The quality of the product is very good.I am very happy to get the same as show online.Thank you.
Hnin Nu Wai recommends InyaKid.
can trust the quality and that's why I love to order from here .Also reasonable price I love the bags from here thank you Inya kids
Naw Hsarmu Lay recommends InyaKid.
Perter Pan recommends InyaKid.
Page is really active. Goods form page photos are same the ouside. Expection and reality are equal
肖薇薇 recommends InyaKid.
Chan Done recommends InyaKid.
Thaw Thaw recommends InyaKid.
I like that it hasavery good service.
နွေအိမ် လင်း recommends InyaKid.
I really like the bag when it arrives. Thank you
Thin Thandar Hlaing recommends InyaKid.
Moe Sandar Hnin recommends InyaKid.
good quality & services.
Chi Khun Set Nay Chi recommends InyaKid.
I like your service and from your page of bags and other things .. they are good qlty...
Don Xian recommends InyaKid.
I love the design and very nice product .It look so cute . Thank you .
Myitzu Yii recommends InyaKid.
အိတ်ကလေးတွေက quality အရမ်းကောင်းပါတယ် ဝယ်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ် delivery ကလည်းအရမ်းမြန်ပါတယ်
Pyae Phyo Aung recommends InyaKid.
The quality is excellent Be more successful!
Nan Mohe Mohe Wai recommends InyaKid.
Angel Angel recommends InyaKid.
review ရေးချင်ပေ့မယ်တခါမှမရေးဖူးတော့ရေးတတ်သလိုပဲရေးလိုက်တယ် အိတ်လေးနှစ်လုံးဝယ်ဖြစ်တယ် အမှန်ကပျင်းလို့လျှောက်ကြည့်ရင်းချစ်ဖို့ကောင်းလို့(စျေးလဲတန် )ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးသုံးချင်သူမို့ ရောက်လာတော့တအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ် စိတ်တိုင်းလဲကျတယ် လေးတွေကအပြင်ပုံလေးနဲ့တူတူပဲ (ချုပ်ခပဲရှိတဲ့စျေးလေ ) ကိုယ်ဝယ်တဲ့အိတ်စျေးလေးတွေက 4400,6800ပါ များကြီးရောင်းကောင်းပါစေနော် inya kids
Bae Bay recommends InyaKid.
The fastest delivery in town.
Customer service is very good too.
Scarlett Khine recommends InyaKid.
Reasonable Price, Good Customer Service, Really Supportive and Good Quality .
Yin Min Thu recommends InyaKid.
I like your bags so much Your bags have reasonable prices and the quality is so good Next time,I'll order from u again thz u sis
Chaw Mwae recommends InyaKid.
Address: room 1104, 3A, Yadanar Hninsi Residence. Yadanar Rd., South dagon township, Yangon city. Myanmar.
© 2022, inyaKid Powered by Shopify